राष्ट्रपति निवासमै घुसेर आक्रमण, राष्ट्रपतिको अवस्था के छ ? — Imandarmedia.com
राष्ट्रपति निवासमै घुसेर आक्रमण, राष्ट्रपतिको अवस्था के छ ?
काठमाडौं। राष्ट्रपति निवासमै घुसेर एकाएक आक्रमण प्रयास भएको छ। श्रीलंकाले केही समययता चरम आर्थिक संकट व्यहोरिरहेको छ। संकट यतिसम्म छाएको छ कि कागज किन्ने पैसा सरकारसँग नभएर परीक्षा रद्द भएका छन्।
अभाव भएपछि महँगी उस्तै छ। भ्रष्ट प्रशासन र नेता, कर छली, वित्तिय क्षेत्रको गलत व्यवस्थापन तथा कोरोना महामारीका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको हो। यतिबेला रुस–युक्रेनको युद्धले पनि त्यहाँको अवस्था धरासायी बनाउनमा मद्दत पुर्याएको छ।
श्रीलंकाले यसबीचमा विदेशी ऋण लिएर देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि खोजेको हो। यद्यपी आफ्नो देशले कमाउने भन्दा बढी ऋणमा भएकाले श्रीलंकामा समस्या सिर्जना भएको हो।
आर्थिक संकटपछि लगातार त्यहाँका जनता सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्। यहाँ सम्मकी बिहीबार राति प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपतिको कार्यालयमै पुगेर आक्रमणको प्रयास गरे।
राष्ट्रपतिको सञ्चार विभागको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार फलामका लठ्ठी, हँसिया र भाटा लिएर प्रदर्शनकारी आक्रमणको लागि तयार थिए। यस विरोधमा संलग्न धेरै व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ।
ती व्यक्तिहरुलाई आतंककारीको संज्ञा दिँद सरकारले उक्त समूहले मानिसहरूलाई उत्तेजित गर्न र देशलाई अस्थिर बनाउन खोजेको आरोप लगाएको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिहरुको अवस्थाबारे प्रहरीले जानकारी दिन मानेको छैन।
द्वीप राष्ट्रका विद्यमान मुद्दाहरु सम्बोधन गर्न सरकार असफल भएको भन्दै बिहिबार राजधानी लगायतका सहरहरूमा विरोध प्रदर्शन गरिएको थियो। यस्ता प्रदर्शन दिन-दिनै बढ्दै गइरहेका छन्।
प्रदर्शनकारीहरूको मिर्मिहानास्थित राष्ट्रपति राजापाक्षको निवास बाहिर प्रहरीसँग झडप भएको थियो। सेनाको बस र जीपमा प्रदर्शनकारीहरुले आगजनी गरेका बताइएको छ। यसैबीच प्रहरी प्रशासनले कोलम्बोका विभिन्न क्षेत्रमा पनि कर्फ्यू लगाएको छ।
श्रीलङ्काले हाल विदेशी विनिमय अभावको सामना गरिरहेको छ जसले गर्दा खाद्यान्न, इन्धन, विद्युत र ग्यासको अभाव भएको छ र आर्थिक सहायताको लागि मित्र राष्ट्रहरूको सहायताको खोजी गरेको छ।
श्रीलङ्काले कम्तीमा पनि १० घण्टाको दैनिक विद्युत् कटौती गरिरहेको छ। मार्च ८ देखि अमेरिकी डलरविरुद्ध श्रीलङ्काली मुद्राको वैधानिक तरलता अनुपात झन्डै ९० अङ्कले अवमूल्यन भएको छ।
तेस्तै,संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानले दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन आसियानका सदस्यहरूलाई सेमिकन्डक्टर र अन्य रणनीतिक घटकहरूको अभाव रोक्न नयाँ आपूर्ति शृङ्खला ढाँचामा सामेल हुन आग्रह गर्ने भएका छन्।
निक्की एशिया समाचार एजेन्सीकाअनुसार नयाँ इन्डो–प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्क यस वर्षको अन्त्यमा अमेरिकाले सार्वजनिक गर्नेछ। यसका विवरणहरू खुल्न बाँकी छ, तर चीनले यसको कडा प्रतिबाद गर्ने जानाएको छ।
अमेरिकाले जापानी सरकारसँग मस्यौदा आदानप्रदान गरिसकेको छ। जापानी समाचार एजेन्सीले जनाएअनुसार चीनलाई असन्तुष्ट पार्न र आसियान देशहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सावधानीपूर्वक यसको परीक्षण गर्नुपर्दछ।
तेस्तै,अमेरिकाले नरुचाउने चीन र रुसका विदेशमन्त्री एकपछि अर्को गरेर भारत भ्रमणका लागि पुगेका छन्। केही समय अगाडि मात्र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले भारतको भ्रमण गरेका थिए।
यतिबेला रुसी विदेशमन्त्री सर्गी लाभरोभ भारत पुगेका हुन्। भारतले रुसको आलोचना गर्नुपर्छ भन्ने अमेरिकी भनाइकाबीच शुक्रबार लाभरोभ भारत पुगेका हुन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेयता भारतले रुसको आलोचना गरेको छैन।
रुसमाथि पश्चिमा राष्ट्रले कडा आर्थिक प्रतिबन्धहरु लगाएका छन्। यस्तोमा भारतले रुसको तेल सस्तो मूल्यमा किन्ने अवसर पाएको छ। लाभरोभको भ्रमणमा भारत र रुसबीच तेल व्यापारको विषयमा पनि कुराकानी हुनेछ।
बीबीसीका अनुसार लाभरोभले रुस–युक्रेन द्वन्द्वको समयमा भारतले अडिग निर्णय गरेको भन्दै सो कार्यको प्रशंका गरेका छन्। भारतले रुसको आलोचना गरेको छैन बरु वार्ताबाट समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ।
यसअघि अमेरिकी सांसदहरुले भारतले रुसबाट नभएर अमेरिकाबाट तेल र हतियार किन्नुपर्ने बताएका थिए। रुसलाई एक्ल्याउने कार्यमा अमेरिका लागि परेको छ। तर भारतले चुपचाप रुसको समर्थन जनाइरहेको छ। चीन पनि भारतको अडानबाट खुशी छ।